YEYINTNGE(CANADA): Saturday, January 23
23 Jan ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/xs6a7i223 Jan 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/23/20100အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်အမျိုးသမီးလှကြာစံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်အမျိုးသမီးများအစည်းအဝေးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးသို့တိုက်တွန်းခြင်း
၂ဝ၁ဝခုနှစ် ဇွန်နဝါရီလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးလှကြာစံအား ဒေသခံဘင်္ဂလီမူဆလငRamzam Ali နှင့် ၄င်း၏သားAbul Hossain တို့မှ အားဓမ္မအနိုင်ကျင့်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ရိုက်နှက်ခံရသော အမျိုးသမီးလှကြာစံမှာ အသက် (၃ဝ)နှစ်ဖြစ်ပြီး (၄)လသားအရွယ်ကလေးငယ်တဦး၏ မိခင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ)နိုင်ငံအတွင်းရှိဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးမှအသိအမှတ်ပြုခံထားရသူဖြစ်ပြီး
၄င်း၏ Ref.နံပါတ်မှာNo. 393-08C00055 ဖြစ်သည်။ လက်ရှိလှကြာစံ၏ အခြေအနေမှာ လုံချုံရေး၊စားဝတ်
်နေရေး၊စသောဒုက္ခပေါင်းများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။ထိုနည်းတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ)နိုင်ငံသို့ လာရောက်ခိုလုံနေကြသော ရဖျူဂျီဒုက္ခသည်များမှာလည်း စား ဝတ်နေရေး၊ လုံချုံရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခ သည်များဆိုင်ရာ
မဟာမင်းကြီးရုံးမှလည်း စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ဆီးဝါးကုသမှု၊ လုံခြုံရေးစသည့် အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပေ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် ရင်သွေးငယ် များမှာ အခက်အခဲများစွာနှင့်ပိုမိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ထို့ပြင်လွန်ခဲ့သော ၂ဝဝ၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃)ရက် နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးမှ အသိအမှတ်ပြု ဦးစစ်နိုင်မှာ ဒေသခံများ၏ ရိုက်နှက်မှုဖြင့် အ သက်ဆုံးရူံးခဲ့ရသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးမှ ၄င်းဦးစစ်နိုင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့အချိန်ထိ တစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိမသိရှိရပေ။ ဤသို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ)နိုင်ငံတွင်း၌ အခါအားလျော်စွာဖြစ်ပွါးမှုများရှိနေရာ နောက်ထပ်ဖြစ်ပွါးလာမည်ကို ရခိုင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးမှ များစွာစိုးရိမ် မကင်းဖြစ်မိပါသည်။
သို့ဖြစ်၍မိမိတို့ရခိုင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးသို့ အပြင်းအထန် တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ
(၁) လက်ရှိ အားဓမ္မအနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက်ခံနေရသော လှကြာစံအား ပြည့်ဝလုံလောက်သော ကူညီထောက်ပံ့မှု အမြန်ဆုံး ပေးရန်။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ရောက်ရှိနေကြသော ဒုက္ခသည်များကို ဤကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုးနောက်နောင် မဖြစ်ပေါ်လာ စေရန် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(၃) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ရောက်ရှိနေကြသော အသိအမှတ်ပြုခံထားပြီးဖြစ်သည့် ဒုက္ခသည်များအားလုံချုံရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် အရေးကိစ္စများအတွက် မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(၄) ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမခံရသေးသော မြန်မာရဖျူဂျီများကို အမြန်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုပေးရန်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ)နိုင်ငံသို့ လာရောက်ခိုလုံနေထိုင်နေကြသော မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ လုံးချုံရေးကို ဒေသခံအာဏာပိုင်များမှလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပေသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ ဝ၁၇၃၂၁၆၅၁၂၇
Mr. Jelvas Musau Date: 23/ 01/ 2010
House N/E (N) 8, Road 90
Gulshan 2, 1212 Dhaka
Subject: : Suggestion from Rakhaing Women’s Union to UNHCR about the case of Rakhaing woman Hla Kra San.
According to the sources on 19th January, 2010 we have got the information that Rakhaing woman Hla Kra Sen was beaten seriously by local resident, Ramzam Ali and his son Abdul Hossain in Bangladesh.
The victim Hla Kra San (aka Gontala Htayri), wasamother of four months old baby. He is recognized by UNHCR of Bangladesh and her ID number is Ref. No.393-08C00055.
Hla Kra San is facing with less security, lack of food and so many others difficulties at the present situation. Likewise, the other political refugees who fled from Burma to Bangladesh are also facing with difficulties for security, living condition, education, medical care. The concern authority of UNHCR is not taking necessary actions to solve those problems for the refugees especially on mothers and young babies who are being strongly neglected. Besides, one of the UNHCR recognized refugee, U Shite Naing was also beaten to death brutally by local resident on 13th August, 2009. Regarding this issue, UNHCR did not filed any case against that local resident until today. These cases happened more often to Burmese refugee living in Bangladesh and we, Rakhaing Women’s Union is afraid and worry for further happening and condemm for violation of women right.
For the circumstance, we Rakhaing Women’s Union strongly urge UNHCR to
1) support all the necessary needs for Hla Kra Sen who was beaten seriously.
2) take necessary action and giving protection to the rest of Burmese refugees so that this kinds of problem will not happen in future.
3) solve the problems of security, living condition, medical care and other issues without fail or delay.
4) and to recognize as early as possible to those refugees who are not yet been recognized by UNHCR.
Therefore, we would like to request earnestly to all of people including local authorities of Bangladesh as well to provide securities for all the refugees who came to Bangladesh from Burma.
Saw Hla Mra Thu CC.
Coordinator of Cox's Bazar Branch (1)UNHCR OfficeCox's Bazar
Rakhaing Women’s Union (2) Ramu Thana
Contact No. 01732165127 (3) Official record
အားလုံးအတွက် 'တစ်နေ့ ' ဆိုတာဟာ မဝေးတော့ပါဘူး...
'အချိန်တွေကြာလှပြီ... ဘာမှမထူးခြားသေးဘူး... ထူးခြားမှာလဲမဟုတ်ပါဘူး...'
ဆိုပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြောနေတဲ့သူတွေကို ပြောချင်တယ်... ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော လက်တွေ့ မှာ ကြိုးစားအားထုတ်ဖူးရဲ့ လားလို့ ... အချိန်အကြာကြီးအဖျက်ဆီးခံရတဲ့နောက်တော့ ပြန်ပြုပြင်ဖို့အချိန်အကြာကြီးလိုဦးမှာပဲ... ဒါပေမယ့် အဲလို ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေမရှိဘဲ အားလုံးတက်ညီလက်ညီသာဆိုရင်တော့ အားလုံးအတွက် 'တစ်နေ့ ' ဆိုတာဟာ မဝေးတော့ပါဘူး...
http://ifile.it/7kg13unThe Voice (6-12)